IZITHOMBE: OwaseThekwini uzakhele isipikha esisebenzisa iBluetooth | News24
IZITHOMBE: OwaseThekwini uzakhele isipikha esisebenzisa iBluetooth
Johannesburg – Owesilisa waseThekwini ufuna ukumisa kabi izinkampani ezinkulu zezobuchwepheshe ezifana noSamsung kanye ne-JVC ngesipikha sakhe esingambi eqolo azakhele ngokwakhe nesikwazi ukusebenzisa iBluetooth futhi i-battery yaso ekwazi ukuhlala izinsuku ezine.
USiyabonga Ndwalane wanquma ukuzenzela isipikha sakhe esisebenzisa iBluetooth – esibizwa ngeTurn UP – ngemuva kokuphoqeleka ukuthi athenge esinye ngemuva kwesinye ngemuva kokwephuka kwezipikha zakhe ezintathu.
“Ngangingeke ngisithenge esesine – ngangino-R600 kuphela ephaketheni kodwa ngangidinga into yokuzijabulisa, ikakhulukazi uma ngabe ngigibele ibhayisekile ezitaladini zeTheku,” uNdwalane ubhale kanjalo esesikhungweni semfundo ephakeme iDurban University of Technology (DUT).
Esebenzisa izingcucu ezihlephukile zezipikha zakhe ezindaba, uNdawalane, wanquma ukuzakhela isiphikha sakhe, okukuqala wayezakhela ezikhwameni kanye nasezigincini ezihlephukile, kwaze kwaba ekugcineni uyathola ukuthi ipayipi lePVC yilona elihle kakhulu ekwakheni lezi zipikha.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Kungenzeka ifanelwe ukubiza u-R18 499 iSamsung Note 8 entsha
“Ngasifaka ebhayisekeleni lami ngabe sengizulazula ngisidlala. Abantu baqala bangimisa futhi bengincoma ngaso; abanye babo babengakholwa ukuthi ngisenze ngokwami. Ngakuziba lokhu kuphawula ngoba ngazenzela ngokwami, kodwa ngemuva kokuthi abantu abalinganiselwa ku-30 bengicele ukuba ngibenzele esisodwa, nganquma ukuthi ngikuzame,” utshele iFin24.
UNdawalane uthi amakhasimende akhe okuqala kwakungonogada, abasebenzi basezindlini kanye nabanye abantu abahola kancane, nokwamphoqa ukuthi akhiqize lezi zipikha ngentengo ephansi.
“Ngafunda ukuthi izinkampani zezobuchwepheshe ezifana noSamsung zizakha kanjani izipikha zeBluetooth. Kwesinye isikhathi ukhokhela nje igama lenkampani yasemazweni,” kusho uNdawalane engeza ngokuthi abantu abakhela izipikha bajabule kakhulu ngomkhiqizo wakhe nokwenza ukuthi akhiqize eziningi.
Izipikha zakhe zishaya ngeBluetooth, isiteshi somsakazo (FM), indawo yokufaka i-SD card kanye nendawo yokufaka intambo ye auxiliary (aux).
Ngenyanga uthi wakha izipikha ezingu-100 kanti usevele usedayise ezingu-200.
“Iphupho lami ukuthi wonke umuzi ube nesisodwa salezi zipikha ezikhonekayo. Umsakazo kanye nomculo kubalulekile kubantu, njengoba bedinga ukuhlale bejatshuliswa futhi baziswa,” kusho uNdawalane.
Happy Sunday for two Daily Lotto players 55 minutes ago Click here for the full list of lottery results